Kata Beach ~ Journey-Assist - Ny tora-pasika tsara indrindra any Phuket
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Phuket » Kata Beach
Famintinana amoron-dranomasina Kata (Kata Beach)
Teny amoron-dranomasina amin'ny sari-tany
Weather on Kata Beach
Saripika sy sary amin'ny teny Kata
Hotely akaikin'ny Beach Beach
Hevitra ho an'ny Kata Beach (valin'ny Google)
Hevitra ho an'ny Kata Beach (Tripadvisor.ru)
Feno olona io torapasika io, mitovy amin'ny tora-pasika Karon. Somary tery kely ny làlana eto, matevina ny trano. Any Kata no faritra amin'ny hotely, voarofy. Lalana mampisaraka azy amin'ny tora-pasika io. Ny toerana fijanonana eo akaikiny dia azo atao manerana izany. Ity tora-pasika ity dia mandeha tsara Katu noi. Ny safidy iray mety indrindra ho an'ny fijanonanao dia ny famakiana hotely iray eo anelanelan'ny Karon sy Kata. Ao amin'ny tapany atsimo ianao dia afaka mahita famantarana sy lalana mankany mankany amin'ny tora-pasika Kata Noi.
Teny beach dia manana fotodrafitrasa tsara sy karazana hetsika fanaovana tora-pasika tsara. Misy zavatra azo ihodinana, zavatra iray mitaingina, zavatra mba milomano.
Manodidina ny fahabetsahan'ny kafe sy ny trano fisakafoanana noho ny tsiro sy ny teti-bola rehetra.
Feno olona ny tora-pasika, indraindray tsy madio ny rano ary ny tora-pasika mihitsy, na dia tsy maintsy omena azy ireo aza ny teratany Thai, araka izay azon'izy ireo atao, miezaka ny hadio amoron-dranomasina. Malalaka ny midina any anaty rano, avy eto dia mahazo aina amin'ny ankizy.
Amin'ny fotoanan'ny orana dia misy onja mahery ary mandeha ny sekoly mikoriana.
Address: Karon, Distrika Mueang Phuket, Phuket 83100, Thailand
Ampisehoy ny sari-tany ho an'ny fanamoriana - https://goo.gl/maps/PEpJp2mSUf6ks5N89
Kata Beach amin'ny sari-tany
Ao amin'ny Widget Interactive eto ambany ahitanao ny toetrandro ankehitriny eo amoron-dranomasina Kata (Kata Beach). Ao amin'ny faran'ny fidirana ny zoro dia fandaharam-potoana ahafahanao mandroso, amin'ny alàlan'ny famoronana toetr'andro ho an'ny filanao.
Saripika sy horonan-tsary Kata Beach
Hotely manodidina ny Kata Beach
Beach Review Kata (Hevitra momba ny Google)
Valiny ho an'ny Kata Beach (Tripadvisor.com))
Tora-pasika tsara ho an'ireo izay tsy manelingelina ny fahamaroan'ny olona. Ary raha tsy diso aho dia eo ambonin'io dia mihetsika hafakely be ny fasika rehefa mandeha eo 🙂 ianao.
Ary amin'ny faritry ny zaridaina eo amoron-dranomasina dia misy fitaovana fanatanjahan-tena.